Maxaad kala Socotaa kooxaha Neymar iyo Coutinho doonayeen in ay mustaqbalka u ciyaaraan 9 sano kahor ?
Sunday, May 27th, 2018 - 12:39:04
Wednesday August 30, 2017 - 20:24:32 in Wararka by Kubad Bile
Neymar iyo Coutinho oo saaxiibbo dhow ah ayaa noqday labada ciyaaryahaan ee ugu hadal heynta badan suuqa kala iibsiga qaarada yurub xagaagaan.
Neymar ayaa kubiiray kooxda kubada cagta ee PSG asigoona noqday ciyaaryahaanka ugu qaalisan taariikhda kubada cagta.
Dhanka Kale Coutinho ayaa si weyn lala xariirinayaa u dhaqaaqita kooxda uu Neymar iska tagay ee Barcelona. ciyaaryahaankaan ayaa ilaa iyo haatan u safan kooxda Liverpool.
Neymar iyo Coutinho oo saaxiibo dhow ah tan iyo dhanlaro nimadooda. ayaa waxa ay si wadda jir u lahayeen riyo ah in ay maalin un kubiiraan kooxda Cadcadka ee Real Madrid.
Labadaan xidig waa saaxiibo dhow waxayna aqoon isku leeyihiin tan iyo sanadii 2008 markii xulka Brazil loogu yeeray kuwa da’dooda ka hooseyso 16-ka sano xiligaas Maarso 2008 waxayna ka wada qayb qaateen tartamo Qatar iyo Yurub lagu qabtay.
Suxufiga wargeyska Marca ka tirsan David Ruiz ayaa xiligaas wareesi la yeeshay laba ciyaaryahaan iyadoo haatan laga joogo 8-sano. David ayaa su'aalo weydiiyay labadaan ciyaaryahaan. halow xiligaas ee aad u da' yarayeen
Suaasha 1-aad: Waa Kuma Kooxda Aad Ku Riyootid Inaad U Cayaartid?
Coutinho: Real Madrid, waayo waa kooxda ugu wanaagsan dunida.
Neymar: Real Madrid.
Su’aasha 2-aad: Waa Kuma Ciyaaryahanka Aad Ku Dayatid Kubada cagta?
Coutinho: Robinho waayo isaga ayaan ka bartay sida kubada labada lugood loogu laado .waxaana jeclahay inaan daawado Barcelona Vs Real Madrid waana labada koox ee aan La Ligaha ka xiiseeyo daawashadooda.
Neymar: Waxaan kusoo biiray Santos anigoo 7-jir ah, waxaan aaday naadiga Portuguesa Santista laakiin kubad rasmi ah waxaan bartay marka aan Santos kusoo laabtay.
Robinho in badan ayaan TV-yada ka daawaday waxaana inta badan isku dayi jiray inaan isaga iska dhigo gaar ahaan sida uu ugu gambiyo cayaartooyda kasoo hor jeedaan.
Sidoo kalena waxaan jeclahay kubada Spain laga ciyaaro, waxa ay ciyaaraan kubad kusoo jiidaneyso, waa kubad xawaare iyo xirfad ku dheehan ayaa Spain laga cayaaraa.
Su’aasha 3-aad: Muxuu Yahay Hadafka Aad Hiigsaneysid?
Coutinho: Waxaan rabaa inaan horyaalka Spain ka ciyaaro waxaana halkaas joogaan xidigaha aduunka ugu wanaagsan sida Robinho iyo Ronaldinho.
Neymar: Waxaan rabaa inaan horyaalka Spain ka cayaaro waa horyaalka ugu xiisaha badan uguna soo jiidashada badan sidoo kalena xidigaha caalamka ugu wanaagsan halkaas ayay joogaan.
Somali president acclaims Ocean Stars youngsters for fantastic performance
Monday April 30, 2018 - 11:10:43
Zidane oo taariikh cusub u dhigay Yurub, balse wali waxaa kasareeya Anceloti ogoow Sabata!
Sunday May 27, 2018 - 12:01:43
Real Madrid oo Rikoor Taariikhi ah u Dhigtay Kooxaha Qaaradda Yurub.
Sunday May 27, 2018 - 00:15:22
Warbixin: Xog walba oo aad dooneysid in aad ka ogaato Liverpool v Real Madrid, Ka hor Final-ka Champions League...
Friday May 25, 2018 - 17:26:22
Lionel Messi oo markii 5aad ku guuleystay Gooldhalinta Yurub iyo Xiddigaha uu ku Garaacay.
Monday May 21, 2018 - 11:56:05
DAAWO: Qaabkii ay u dhacday Xafladii ugu Cajiibsaneyd ee Lagu Sagootiyay Andres Iniesta!!
Monday May 21, 2018 - 11:24:30